I-atherosclerosis yamaphethelo aphansi (ukuqeda): izimbangela, izimpawu, ukwelashwa nokudla > Izinkinga zesifo sikashukela
I-atherosulinosis yemikhumbi yezimpawu eziphansi (obleteric) izimpawu, ukwelashwa, izimbangela, ukudla
I-atherosclerosis yamaphethelo aphansi ezindongeni zemithambo yegazi, kufakwa i-cholesterol plaque, okubangela ukwehla okukhulu kwe-lumen ye-vascular
I-atherossteosis imvamisa imbangela yokuhlinzekelwa kwegazi okungenampilo emikhawulweni ephansi. Ngalesi sifo, ama-cholesterol plaque afakwa ezindongeni zemikhumbi, okubangela ukwehla okukhulu kokukhanya kwemikhumbi noma ngisho nokunqwabelana kwawo okuphelele. Umphumela wokuncipha kwe-lumen noma ukuvalwa okuphelele kwemithambo yegazi ethwala igazi emikhawulweni ephansi yi-ischemia - isifo esine-oxygen esanele ekuhlinzekeni i-oksijini kwezicubu namaseli.
Ukuntuleka komoya-mpilo ezicutshini kuhambisana nobuhlungu. Ezimweni ezinzima zesifo, ukunikezwa okunganele kwe-oksijini kwezicubu kungadala izilonda ezinde kakhulu futhi kube nokuqhuma kwesikhumba.
Kodwa-ke, lezi zimo azivamile. Zitholakala ezigulini ngokuqhubeka kwe-atherosclerosis, kanye nasekwelashweni okungafanele noma okunganele.
Njengamanje, izimpawu ze-atherosclerosis zamaphethelo aphansi zitholakala kubantu abangu-10-12% abaneminyaka engaphezu kwengama-65 ubudala. Imvamisa, lesi sifo sithinta abesilisa ababhemayo abangaphezu kweminyaka engama-50. Kodwa-ke, abantu abasha abasengozini yalesi sifo nabo bangahlushwa yi-atherosulinosis yemikhumbi etholakala emaphethelweni aphansi.
Izimpawu nezimpawu ze-atherosulinosis zamaphethelo aphansi
Nge-atherosclerosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi, isibonakaliso sesikhathi eside kungenzeka singabonakali, siziveza kuphela esimweni sokuzivocavoca okukhulu ngokomzimba.
Isimpawu esibonakalayo ku-atherosulinosis yemithambo yonyawo kubuhlungu bemisipha okwenzeka ngenkathi uhamba. Lolu phawu lwesifo luvame ukubizwa ngokuthi i-lameness ephakathi, ngoba uma kwenzeka umthwalo omkhulu emilenzeni, izinhlungu zenzeka kuzo, futhi isiguli kufanele sime ukuze sinciphise.
Ukuthuthukiswa kwalesi sifo kuboniswa ekwehliseni ibanga umuntu akwazi ukuhamba ngalo ngaphandle kokuma. Ezigabeni zakamuva, izinhlungu eziphikelelayo zikhona ezinyaweni noma ezinzwaneni, noma uphumule.
I-lameness ephakathi ingahle ihambisane nezinye izimpawu, ezibandakanya:
ukukhubazeka emalangeni okuthinteka yilesi sifo,
izilonda ezinde ezingavaliwe namanxeba ezinyaweni nasemilenzeni,
imifantu nokukhonkotha esikhunjeni semilenze.
Uma kwenzeka uqaphela okungenani eyodwa yalezi zimpawu ezingenhla, kuyadingeka ukubonana nodokotela ohlinzayo wemithambo ukuze kutholakale ukuthi isifo kungenzeka yini ngesikhathi futhi ugweme izinyathelo ezinamandla zokulwa naso - ukunqunywa kwezingalo.
Igama elithi "ukwahlukanisa" lisetshenziselwa ukubonakalisa izifo zemithambo yegazi, kuvezwe ekunciphiseni kancane kancane kokukhanya kwemithambo yemithambo yegazi, okubangela ukuphazamiseka kokuhamba kwegazi. Ukuncipha kwe-lumen uma kwenzeka ukuqothuka kwe-atherosulinosis kubangelwa ukwanda kosayizi beendawo ezibizwa ngokuthi i-atherosulinotic plaques.
Izici zengozi ezingadala i-atherosclerosis obliterans of the m'mikhawulo ephansi, kanye nezinye izifo zemithambo yilezi:
ukuba khona kwe-cholesterol ephezulu egazini,
Ukubhema kuyinto ebaluleke kakhulu futhi ebaluleke kakhulu ebeka engcupheni, ekhulisa amathuba wezifo kanye nokukhula kwe-atherosclerosis. Ngomzamo wokuvikela ukuqala kwe-atherossteosis noma ngesikhathi sokwelashwa kwalesi sifo, kufanele uqale ucabange ngokuyeka ukubhema.
Ukuntuleka kwe-arterial, kuvezwe ngokungahambisani nokugeleza kwegazi emilenzeni, kunezigaba ezi-4:
Isigaba I - ukuba khona kobuhlungu emilenzeni okuvela kuphela ngemuva kokuzivocavoca okukhulu ngokomzimba,
Isigaba II - ukwenzeka kobuhlungu ngokuhamba okufushane okulingana (cishe amamitha ayi-200),
Isigaba III - ukubukeka kobuhlungu emilenzeni lapho uhamba amabanga amafushane (kufika ku-50 m) noma ekuphumuleni,
Isiteji IV - ukubukeka kwezilonda eziyizidudla, kwesinye isikhathi kuhambisana ne-gangrene yemikhawulo ephansi.
Ezigulini ezinenkinga yokuqothula i-atherosulinosis yemilenze, zonke izinkomba ezilandelayo noma ezingaphezulu zingaqoshwa:
Ukukhathala noma ubuhlungu bethole ngenkathi lihamba. Lesi sibonakaliso siyisibonakaliso sokuqala kwe-atherosulinosis yesistimitha yemithambo yemikhawulo ephansi.
Ukuzizwa kubanda nokuqina kwezinyawo, kukhulu ngokuhamba ngezinyawo nangezitebhisi ezikhuphukayo.
Izinga lokushisa elihlukile lamaphethelo (umlenze othintwe yi-atherossteosis ubanda kakhulu kunempilo).
Ukuba khona kobuhlungu emlenzeni, noma ngabe kungekho ukucindezela.
Ukuba khona kwezilonda noma amanxeba angapholi esifundeni somlenze noma unyawo olungezansi.
Ukuba khona komnyama kwesikhumba ezinyaweni nasezinzwaneni.
Inqubo yokwelapha i-atherosclerosis obliterans yemikhawulo engezansi inqunywa kakhulu yisigaba sesifo kanye nobukhulu bendawo ethintekile. Esigabeni sokuqala, ukuqedwa kwezimpawu zobungozi kungaqinisekisa ukuvimbela ukuthuthukiswa kwalesi sifo. Kufinyelela lokhu, isiguli kufanele siguqule indlela yaso yokudla nendlela yokuphila.
Uma isiguli sitholwa isifo sokuqina kwemithambo yemithambo yemilenze, khona-ke siyakudinga, okokuqala:
Lungisa ukudla kwakho ngokunciphisa ukudla okuphezulu ku-cholesterol namafutha ezilwane.
Buyisa isisindo sakho.
Kubalulekile ukuyeka imikhuba emibi futhi, okokuqala, ekubhemeni.
Thatha izinyathelo zokugcina umfutho wegazi phakathi kobudala obufanele besikhathi (kubantu abangaphezulu kweminyaka engama-50-60, ingcindezi kufanele ibe ngu-140/90 mmHg).
Uma kunesifo sikashukela, khona-ke isiguli kufanele sithathe izinyathelo zokugcina amazinga evamile kashukela.
Gada i-cholesterol yegazi.
Ukwelashwa kwe-atherosclerosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi kungenziwa ngezindlela eziningi:
ukwelashwa okungeyona yezidakamizwa (ngaphandle kokusebenzisa izidakamizwa),
ukwelashwa ngezidakamizwa (nokusetshenziswa kwemithi),
ukwelashwa kwezifo ezibangele isifo sokuqina kwemithambo yegazi,
Ukwelashwa okungezona izidakamizwa kuyenziwa ukuze kwenziwe impilo iphelele futhi isuse nezinto eziyingozi kuyo. Uma okungenani isici esisodwa sengozi siqedwa, khona-ke lokhu kuzoba ukhiye wokwehliswa okukhulu kwengozi yezinkinga ezahlukahlukene. Ukuqedwa kwazo zonke izinto kuzoholela ekuphuculeni okukhulu ekuqaphelekeni kwalesi sifo.
Lapho wenza ukwelashwa ukuvimbela ukuhlukaniswa kwegazi, isiguli sisebenzisa izidakamizwa ezisehlisa i-cholesterol yegazi. Ukwelashwa kungenziwa ngama-statins (ngokwesibonelo, ama-zapor noma ezinye izidakamizwa kuleli qembu), i-allicor (umuthi olwa ne-sclerotic osuselwa ku -galikhi), izidakamizwa ezihluza imithambo yegazi (cilostazol, verapamil), zinciphisa ukubukeka kwegazi futhi zinciphise ukugeleza kwegazi (i-chimes, i-VesselDue F, i-thrombo-ass, i-aspirin, i-reopoliglyukin, i-pentoxifylline). Umphumela omuhle walokhu kwelashwa utholakala kuphela ngemuva kwezinyanga ezimbalwa zokwelashwa.
Esimweni esifanayo, lapho izinhlungu zenzeka ekuphumuleni, kanye nasebusweni bezilonda ze-trophic noma i-necrosis yonyawo, indlela yokwelashwa eyinhloko, njengomthetho, inqubo yokuhlinza equkethe ukushunqa, i-prosthetics, i-balloon angioplasty, njll.
Izindlela zokuvimbela isifo sokuqina kwemithambo yemithambo yemilenze
Isidingo sokuthola isifo sokuqina kwemithambo yegazi okuwukudla, okuyiphuzu elibalulekile ekwelashweni kwalesi sifo. Inhloso yokudla ukunciphisa inani lokudla okuqukethe inani elithile lamafutha ezilwane ne-cholesterol.
Kunconywa ukufaka ekudleni:
inyama enciphile yenkukhu, i-veal, unogwaja,
noma yiziphi izinhlanzi zasolwandle
izinhlobo ezinamafutha amancane wobisi nemikhiqizo yobisi,
Amaqanda ama-1-2 ngeviki,
izithelo nemifino entsha, eqandisiwe, isobho semifino,
izithako ezinamafutha amancane nezinongo,
iziphuzo ezithambile, iziphuzo ezingenashukela, ikofi elibuthakathaka, itiye.
Imikhiqizo ukusetshenziswa kwayo kumele kukhawulelwe:
Ngalesi sifo, kwenqatshelwe ngokuphelele ukudla:
ham, ubhekeni, isinqe, imajarini, ibhotela,
ipate, amasoseji, umvimba, inyama enamafutha,
umhluzi wenyama enamafutha,
ushizi we-cottage fat, ukhilimu omuncu, ukhilimu, uncibilikisiwe nobisi lonke,
ama-chips, ama-fries ama-french, amazambane athosiwe,
Ukudla kufanele kuthathwe kudliwe noma kubiliswe futhi kuphekwe kuphela emafutheni wemifino. Lapho upheka umhluzi wenyama, kungcono ukususa amafutha, futhi lapho ubhaka, esikhundleni seqanda eliphelele, kungcono ukusebenzisa amaprotheni kuphela. Ngokugqoka isaladi, kungcono ukusebenzisa uwoyela, mhlawumbe umnqumo, ungangeza nojusi kalamula noma uviniga kubo. Usawoti uhlanzwa kahle ngokuphelele noma okungenani umkhawulo.
Ukudla okuyisibonelo kweziguli ezine-atherosclerosis yamaphethelo aphansi
I-Millet porridge enobisi, isaladi yemifino egcotshwe uwoyela wejongilanga, ikofi.
Ushizi wekotishi omnandi, eliphakathi kwe.
Isobho elinemifino, ucezu lwenaliti ebilisiwe eyenziwe nge-nokunye okufana nokolweni, inhlanganisela yezithelo eyomile.
Isaladi lifakwe ngamafutha yemifino futhi senziwe ngotshani basolwandle, ucezu lwenhlanzi yasolwandle enezicucu zamazambane abhakwe, itiye nelamula.
I-atherosclerosis yemikhumbi etholakala emaphethelweni aphansi, ingazenza izizwe ngesimo sokukhala isikhashana. Endabeni yokuqhubeka kwesifo kanye nokuntuleka kokwelashwa okufanele, i-gangrene ebanzi ingakhula, okuzoholela ekunqunyweni komlenze ophansi othintekile. Izinga lokuthuthuka kwalesi sifo linqunywa inani kanye nobukhulu bezimpawu zobungozi ezihambisana nalo (ukubhema, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, ukukhuluphala, njll.).
Endabeni yokunakekelwa kwezokwelashwa okufika ngesikhathi, ukunakekelwa kwekhwalithi esezingeni eliphezulu, ukuyeka ukubhema, ukudla, ukuqapha ngokuhlelekile nokulungiswa kwengcindezi yegazi, ukuqeqeshwa nsuku zonke, ukubulawa kwe-angioplasty ngesikhathi esifanele noma ukuhlinzwa okudingekile, kungenzeka kunciphise noma ukunciphisa izimpawu zesifo, kulondolozwe imilenze ephansi futhi kuthuthukiswe ikhwalithi yempilo yeziguli. .
Sibutsetelo ekuqothulweni kwe-atherosulinosis yemithambo yemilenze: izimbangela, izigaba, ukwelashwa
Kulesi sihloko uzofunda: yini i-atherosulinosis ehlasela imithambo yemikhawulo engezansi, iziphi izigaba ezikhona. Yimiphi imiphumela yesifo, izindlela zokuxilonga nokwelashwa.
Izifo ezihlukanisayo yilezo lapho ukukhanyiswa komkhumbi kuhlangana khona, kuze kube ukuqhuma okuphelele. Isifo esivame kakhulu kuleli qembu yi-atherossteosis.
Ngokuqothuka kwe-atherosclerosis yamaphethelo aphansi, ama-cholesterol plaque afakwa emithanjeni yemilenze. Uma ukwelashwa kungaqalwa ngesikhathi, i-pathology ingaholela ekukhubazekeni ngenxa yokuphazamiseka kwemithambo yegazi.
Uma kunezimpawu ze-atherosclerosis, thintana no-GP wangakini okuzokudlulisela ku-angiologist - onguchwepheshe ekwelapheni imithambo yegazi.
Akunakwenzeka ukwelapha lesi sifo ngosizo lokwelashwa okulondoloziwe. Kepha ukwelashwa kuzosiza ukugwema izinkinga eziyingozi futhi kuthuthukise inhlala-kahle yakho.
Lesi sifo sivela ngenxa yokuphazamiseka kwe-metabolic.
Izici ezinomthelela ekuthuthukiseni lesi sifo:
Uma okungenani isihlobo sakho sinesifo sokuqaqanjiswa kwamathambo, namathela ekudleni futhi sigweme imikhuba emibi, ngoba usengozini enkulu yokugula.
Ukwehlukanisa i-atherosclerosis kuqhubeka ngezigaba eziningana:
I-preclinical atherosclerosis. Okwamanje, izimpawu azikabonakali. Isifo esisesigabeni sokuqala singatholakala kuphela ngokuhlolwa okukhethekile kwemikhumbi. Oxhumeni (odongeni olungaphakathi) lwemithambo kunama-deposits amancane wamafutha ngesimo semivimbo kanye namabala.
Kuvezwe kubuthaka. Izindawo ezitholakala njalo ze-cholesterol zitholakala ezindongeni zemithambo yegazi. Kulesi sigaba, izimpawu zokuqala ziqala ukuvela. Uma uqala ukwelashwa ngalesi sikhathi, ungazigwema izingqinamba futhi uvikele ukuqhubeka kwesifo.
Kuvezwe ngokuqinile. Ushintsho olubalulekile lubonwa emthanjeni wemithambo yegazi. Amadiphozi weLipid athatha uhlobo lwamapothi, aqala ukunciphisa umucu wemikhumbi. Kulesi sigaba, zonke izinkomba zesifo sezivele zikhona, okuthe noma kunjalo akunakwa. Kakade kulesi sigaba sokuthuthuka, i-pathology ingadala izinkinga eziyingozi zokujikeleza kwempilo.
Kumenyezelwe. Kulesi sigaba, umsebenzi wemithambo yegazi uphazamiseka ngokuphelele. Izicucu zama-atherosclerotic plaque ziyaphuma zizungeze ngaphakathi kwemithambo yegazi. Ama-Aneurysms (i-pathological dilatation) nawo avela emikhunjini, ngenxa yokuthi i-artery ingaqhuma. Ngaphezu kwalokho, i-plaque ingavala ngokuphelele umkhumbi. Ngenxa yakho konke lokhu, ukuhanjiswa kwegazi emikhawulweni engezansi kuphazamiseka kakhulu.
Izinyawo ziqala ukubanda njalo
imilenze ihlala iguge
ukuvuvukala kwemilenze kwenzeka
uma lesi sifo sithinta umlenze owodwa, sihlala sibanda kakhulu kunesinempilo,
Ubuhlungu emilenzeni ngemuva kohambo olude.
Lokhu kuvezwa kuvela esigabeni sesibili. Kulesi sigaba sokuthuthuka kwe-atherosclerosis, umuntu angahamba amamitha ayi-1000-1600 ngaphandle kobuhlungu.
Abantu abavame ukunamathisela ukubaluleka kwezimpawu ezinjengokuqandeka, ukuzwela ngezikhathi ezithile, izinhlungu lapho uhamba amabanga amade. Kepha ngeze! Ngemuva kwakho konke, ukuqala ukwelashwa esigabeni sesibili se-pathology, ungavimbela izinkinga eziyikhulu.
Imisipha ikhula kancane kunangaphambili
imilenze iqala ukuphuma
Ubuhlungu bungenzeka ngokuzenzekelayo imini nobusuku,
Ubuhlungu buvela ngemuva kokuhamba amabanga amafushane (250- 900 m).
Konke lokhu kwenzeka ngenxa yokunganeli kwegazi okwanele kwizicubu zemilenze. Uma ungaqali ukwelashwa, lesi sifo sizongena esigabeni 4 - esiyingozi kakhulu.
Lapho umuntu enesigaba sesine sokuqeda i-atherosulinosis yemilenze, akakwazi ukuhamba amamitha angama-50 ngaphandle kobuhlungu. Ezigulini ezinjalo, ngisho nohambo lokuyothenga luba ngumsebenzi omkhulu, futhi kwesinye isikhathi ukuphuma nje egcekeni, njengoba ukukhuphuka nokwehla izitebhisi kuphenduka ukuhlukunyezwa. Imvamisa, iziguli ezinesifo sesigaba 4 zingahamba nje endlini. Futhi njengoba izinkinga zikhula, azisavuki nhlobo.
Kulesi sigaba, ukwelashwa kwesifo esiqeda i-atherosulinosis yamaphethelo aphansi kuvame ukungabi namandla, kungakhulula izimpawu okwesikhashana futhi kuvikele ezinye izinkinga, njengoku:
mnyama kwesikhumba emilenzeni,
I-gangrene (ngale nkinga, ukunqunywa komlenze kuyadingeka).
Ukuhlonza lesi sifo, isiguli kudingeka sibhekane nezinqubo eziningana zokuxilonga.
Udokotela uhlola izimpawu zesiguli, irekhodi lakhe lezokwelapha (izifo zangaphambilini), ulinganisa umfutho wegazi ezingalweni nasemilenzeni, ulalele ukudonsa kwemithambo yemithambo engezansi.
Le ndlela ikuvumela ukuthi uhlole isimo semithambo yegazi. Ngokuthwebula okuphindwe kabili, udokotela angabheka ukwakheka kwemithambo, athole ijubane lokuphuma kwegazi kubo.
Lokhu kuhlolwa kwemithambo yemilenze usebenzisa umshini we-x-ray.Ngaphambi kokuhlolwa, umenzeli ohlukile uphathiswa isiguli. Uma isiguli simelana nayo, inqubo leyo iyaphikiswa.
I-peripheral arteriography ingabona ama-aneurysms, ukuqhuma kwemithambo yegazi. Imvamisa, odokotela banquma enye yezindlela ongakhetha kuzo: ukuskena okuphindwe kabili noma i-arteriography. Izintandokazi zinikezwa inqubo yokuqala, ngoba ayidingi kungeniswa kwephakathi ehlukile futhi ivumela ukuhlolwa okuningiliziwe kokujikeleza kwegazi emilenzeni.
Inqubo ye-Peripheral Arteriography
Lokhu kuhlolwa kwemithambo esebenzisa umshini we-MRI. I-MR angiography ikhombisa ngokuningiliziwe ngesimo semithambo futhi ivumela ngisho nokushintsha okuncane kwe-pathological ekwakhiweni kwemithambo yegazi nokujikeleza kwegazi kutholakale. Le nqubo inqunyelwe uma bekungenakwenzeka ukwenza ukuxilongwa kokugcina ngemuva kokuhlolwa kwe-duplex noma i-arteriography (imvamisa ukwelashwa kunqunywe ngemuva kwenye yalezi zinqubo).
Lesi sifo singalashwa ngokuphelele ngosizo lwe-vascular prosthetics. Kodwa indlela enjena enjalo iyadingeka kuphela ezigabeni 3-4: ukuthatha amalungiselelo anele u-1-2, okuvimbela ukubekeka okuningiliziwe futhi kususe izimpawu ezingezinhle ze-atherossteosis.
Zingahlakazwa ngezigaba zokuqala zesifo (sokuqala nesesibili). Ngosizo lwemithi, unganciphisa izimpawu, uthuthukise izinga lempilo lesiguli futhi uvikele ukuthuthuka okuqhubekayo kwalesi sifo. Ukwelashwa ngezidakamizwa kuyadingeka futhi ngemuva kokuhlinzwa. Kuzofanela usebenzise izidakamizwa njalo empilweni yakho yonke.
Ukuhlinzwa kubekwe ezigabeni 3 no-4, lapho ukwelashwa okulondoloziwe sekuvele kungasebenzi.
Ukwelashwa kokuhlinzwa kwe-atherosclerosis obliterans kungafaka phakathi ukuklwebheka, ukudlula imithambo ethintekile, noma ukubuyisela esikhundleni sokwakha okwenziwe ngokungemthetho.
I-Angioplasty kanye ne-artery yomlenze
Ukuhlinzwa kungavulwa noma kuvikeleke kancane. Ukungenelela okuhlaselayo okuphephile, kepha kusetshenziswa kuphela uma indawo ethintekile yomthambo incane.
Nge-gangrene noma izilonda eziningi, ukunqunywa kwengalo kwenziwa. Ngokuvamile, ubunzima obunjalo buvela kuphela esigabeni sesi-4 se-atherosulinosis. Konke okungenzeka kumele kwenziwe ukwelapha lesi sifo ngaphambi kokuba kudalwe ukwelashwa okunjalo okukhulu.
Uma udla kuphela izidakamizwa, kepha uqhubeke nokuhola indlela efanayo, ukwelashwa ngeke kube nomphumela omuhle ofunekayo.
Okokuqala, uma usuthole i-atherosclerosis ewohlokayo yemikhumbi yemikhawulo engezansi, udinga ukuyeka imikhuba emibi.
Yekani ukubhema kuqala. INicotine yakha imithambo yegazi, okuholela ekulimazeni okukhulu kwegazi ukugeleza emilenzeni.
Futhi, ungazivumeli ukuphuza kaningi. Utshwala bukhuthaza ukwakheka kwe-edema, esivele ivele ngenxa yokulimala kwe-hemodynamics ku-atherosclerosis.
Ingxenye yokwelashwa ukudla okukhethekile. Landela imithetho yokudla okufanele Khawulela amafutha wezilwane. Sebenzisa ibhotela engekho ngaphezulu kwe-20 g ngosuku (futhi kufanele kube uwoyela osezingeni eliphakeme, hhayi i-margarine noma ukusakazeka, equkethe amafutha we-trans).
Faka okunye ukudla ekudleni kwakho okwehlisa i-cholesterol yakho yegazi. Nalu uhlu lwabo:
izithelo zamawolintshi (amagilebhisi, ulamula, amawolintshi),
amajikijolo (ama-lingonberry, ama-sitrobheli, ama-currants, ama-blueberries, amagilebhisi).
Ungazami ukufaka okunye ukwelashwa kwendabuko ngamakhambi abantu - lokhu kuzoholela ekwandeni kwesifo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kwiziguli ezine-atherosulinosis ze-degree 3 nangaphezulu - lapha ongeke ukwazi ukukwenza ngaphandle kokuhlinzwa. Kodwa-ke, umuthi wendabuko unikeza amakhambi amaningi angangeza kakhulu ekwelapheni kwendabuko futhi enze ukwelashwa kuphumelele kakhulu.
Ngaphambi kokusebenzisa noma iyiphi amakhambi abantu, thintana nodokotela wakho, njengoba kungenzeka ukuthi bane-contraindication.
Amakhambi e-Folk aqeda i-atherosclerosis yemithambo yemilenze:
Umsoco we-atherosclerosis yemikhawulo engezansi: imenyu yemikhiqizo ewusizo
I-Atherossteosis ngokuyinhloko ihlotshaniswa nokudla komuntu. Ngenxa yalokhu, ukudla kwe-atherosulinosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi kubaluleke kakhulu ekwelashweni kwe-pathology, futhi ngaphandle kwayo, ukuthuthukisa isimo sesiguli akunakwenzeka ngisho nezidakamizwa zesimanje kakhulu. I-Pathology yenzeka ngenxa yokwephulwa kwe-lipid (fat) metabolism.
Kubalulekile! Ingozi i-cholesterol embi kuphela, ngenkathi okuhle kudingekile, futhi ngenxa yalokho, lapho udla, kubalulekile ukunciphisa ukuncipha kokuqala kuphela.
Imihlahlandlela ejwayelekile yokudla okunempilo yokuvikela isifo samathambo
Ezimweni eziningi, ukulandela imithetho embalwa elula ekondleni kusiza ukuvikela ukubonakala kwe-atherosulinosis yemithambo yomlenze, okuyindlela eyingozi kakhulu ye-pathology, njengoba iziveza kuphela lapho lapho ubunikazi bemikhumbi sebephulwe ngezinga elikhulu, futhi izinkinga zaqala ukukhula. Ngendlela enganakwa ikakhulukazi, lesi sifo sibanga ukuqothuka futhi sibangele ukulahleka kwezinga eliphansi.
Imithetho eyisisekelo yokondleka yilena:
½ Ukudla kokudla kufanele kube nemifino noma izithelo.
Ukusebenza kwe-1/3 kuqukethe ukudla okunotha ama-carbohydrate ahamba kancane (njengoshukela).
Ingxenye ye-1/3 - ukudla kwamaprotheni, kufaka namafutha ezilwane.
Sebenzisa kuphela ukudla okubilisiwe, okunukayo noma okubhakiwe. Ukudla okuthosiwe nokubhemayo kwenqatshelwe.
Isincomo esisha ngokufanele sokudla kwe-atherossteosis yemikhumbi yemilenze nokuyivimbela ukusetshenziswa nsuku zonke okungenani kwezingu-100 noma izithelo zemifino, ezinemibala elandelayo:
Ngokwehlukana, kufanelekile ukugqamisa imbewu yegalikhi nefilakisi, okufanele kube ekudleni kwansuku zonke, ngoba inegalelo ekuqhekekeni kwamapulangwe akhona, ikakhulukazi emaphethelweni aphansi.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukudla kuphela, ngisho nokubambelela ngokuqinile, okungeke kuvikele ngokuphelele kulesi sifo uma, ngaphezu kokungondleki, kunezinye izinto ezibeka phambili kulesi sifo. Izici ezilandelayo zinomthelela ekwakhekeni kwama-atherosselotic plaque emithanjeni yemilenze:
Ukuze uzuze umphumela omuhle, ngaphezu kwezondlamzimba, indlela yokuphila kufanele futhi ibukezwe ngenhloso yokwandisa ukusebenza komzimba, ukunciphisa izimo ezicindezelayo nokuhlala isikhathi eside ezweni ezindaweni ezinomoya omsulwa.
Njengoba i-vasherical atherosclerosis ikhula masisha, futhi ama-plaque asevele ebonwa ngisho nasebusheni, kuyadingeka ukufundisa ingane ukondleka okufanele nendlela yokuphila kusuka ebuntwaneni ukuvimbela ezinye izinkinga ngemithambo yomlenze.
I-cholesterol embi, ngokungafani nokuhle, ayibambi iqhaza ezinqubweni zokukhiqizwa kwama-hormone nokwakhiwa kwamathambo anempilo. Ngaso leso sikhathi, into ingena emgodini wegazi futhi, uma ingasasetshenziswa futhi ihlukaniswa, ihlala kancane kancane ezindongeni zemithambo. Ngenxa yalokhu, umuntu ubhekene nokuqothuka kwe-endarteritis. I-cholesterol embi ingena emzimbeni ngamanani amakhulu ngokudla, kuyilapho kukhiqizwa cholesterol enhle isibindi.
Lapho udla ukuze unciphise izinga le-cholesterol embi emzimbeni, akudingeki nje ukufaka imikhiqizo ethile kumenyu yakho futhi ukhiphe eminye kuyo, kodwa futhi nokugcina irejimeni efanele yokuphuza, ulungiselele futhi udle ukudla. Uzodinga ukunaka inani likasawoti nsuku zonke, okungafanele lidlule ku-10 g.
Njengoba inani lama-carbohydrate ngesikhathi sokudla lehliselwa kakhulu, kunomthwalo omkhulu ezinso, ngakho-ke, ukuvimbela ukubonakala kwamatshe nesihlabathi, udinga ukuphuza okungenani amalitha ama-2 amanzi ahlanzekile ngosuku. Ekushiseni, inani loketshezi kufanele lenyuke lifinyelela kumalitha ama-3.
Ngaphezu kwamanzi, kuyasiza ukuphuza amajusi ezithelo amasha ngaphandle koshukela. Ukuze kube noshukela, uju lungangezwa ngemali encane.
Ukunaka! Uma kunezifo zezinso, khona-ke ukudla kufanele kusheshe kuqashelwe ukuze kungazwisi ukwanda kwesimo. Ukubonisana kwangaphambili nodokotela oyi-urologist kuyadingeka.
Ukudla kufanele kube ngokuxhamazanayo, ezingxenyeni ezincane ukuze umzimba ungazweli ukulayisha ngokweqile. Kufanele kube ngemuva kwamahora angama-3-4, ngaphandle kokudla okungenamsoco phakathi kokudla. Uma ufuna ngempela ukudla, khona-ke ungadla izithelo noma imifino, kepha ungabi ngaphezu kwama-300 g ngasikhathi, futhi akufanele ube nesitashi esikhulu.
Ukusetshenziswa kwamafutha wemifino ikakhulukazi, uwoyela omnqumo namalayidi. Kuyamukeleka futhi ukusebenzisa ithanga. Kula mafutha, akufanele upheke kuphela ukudla, kodwa futhi nesaladi nakho. I-Butter, noma ngamanani amancane, ivinjelwe ngokuphelele.
Ukuhambisana nokudla kokudla kwe-atherosclerosis yemilenze kuyadingeka empilweni. Ukwephulwa kwalo akuvunyelwe ngaphezu kwezikhathi ezingama-1-2 ngonyaka, kodwa kuphela uma kungasenzi isimo sibe sibi futhi kungavumeli ukubukeka kobuhlungu emilenzeni noma ukungasebenzi kahle kwesibindi.
Utshwala obunesifo semithambo nemithambo yemikhawulo engezansi nokusetshenziswa okujwayelekile kuholela ekutheni ama-cholesterol plaque emikhunjini aqale ukwanda kakhulu, ngenxa yokuthi isimo sesiguli siba sibi kakhulu, nobuhlungu obukhulu emilenzeni buvela.
Kuvunyelwe ukusebenzisa iwayini elibomvu elikhanyayo kuphela ngenani elincane (hhayi ngaphezu kwe-100 ml) kanye njalo ezinyangeni ezi-2-3.
Uma kungenzeka, noma ibuphi utshwala kufanele bushiywe.
Imikhiqizo eminingana ye-atherosulinosis yemikhumbi ephansi ingaphansi kokuvinjelwa okuqinile futhi kufanele ikhishwe kwimenyu. Ezinye zingasetshenziswa, kepha ngamanani amancane noma ngokubhuka okuthile.
Ukusetshenziswa kwamaqanda kwe-atherosulinosis kufanele ukunakwa okukhethekile. Isikhathi eside bekukhona umbono ongaqondile wokuthi lo mkhiqizo oyingqayizivele ungumthombo we-cholesterol embi. Namuhla, lapho kufakazelwa ukuthi lokhu akunjalo, abaningi bayaqhubeka nokukholelwa ezinganekwaneni futhi balahla amaqanda.
I-cholesterol, etholakala emaqanda enkukhu, yinhle futhi ayilimazi imithambo yegazi. Kodwa-ke, ngenxa yokuthi izinto ezisetshenziselwa ukwakhiwa kwamaqanda, uma zisetshenziswa ngokweqile, zingadala ukugcwala kwesibindi ngemuva kokudla okune-carb ephansi, kuyadingeka ukuzikhawulela kumaqanda ayi-8 ngeviki.
Kunemikhiqizo eminingi evunyelwe ezigulini, futhi ngenxa yalokho ukudla kwehlukahluka. Inconyelwe ukusetshenziswa:
amajikijolo - ikakhulukazi izimbali ezibomvu, ziphuzi nezimnyama,
izithelo - ikakhulukazi izithelo zamawolintshi namapomegranati,
izithelo ezomisiwe ngenani elincane,
imifino - kuhle kakhulu ukudla iparsley,
amantongomane - hhayi ngaphezulu kwama-40 g ngosuku,
imikhiqizo yobisi engenawo fat ngaphandle koshukela,
inyama engenamafutha - mhlawumbe inyama yenkomo nenogwaja,
okhalweni kanye nejelly kususelwa kuyo,
ukumhlophe kothosi - hhayi isifo sikashukela.
Lapho kukhona noma yiziphi izifo ezingamahlalakhona, imikhiqizo eyengeziwe ingafakwa ekudleni noma eminye yemukelekile ingafakwa ngaphandle. Lokhu kunqunywa udokotela oholayo.
Ukusetshenziswa kokudla kwe-atherosulinosis yemikhumbi yemikhawulo engezansi kufakiwe kwinqubo yezindlela zokwelapha, futhi ngenxa yalokho ukulungiswa komsoco kungenziwa kuphela ngaphansi kokuqondisa udokotela. Isiguli ngeke sakwazi ukungenela ngokunganqikazi kokudla okusha kokudla noma sikhiphe noma ikuphi kwako. Imvamisa, ukondleka okwelaphayo kwanele ukumisa ukuqhubeka kwesifo futhi ulondoloze impilo.
Izimbangela kanye nokwelashwa kwe-atherosclerosis obliterans yemikhumbi yemikhawulo ephansi
Ngokusho kwesigaba somhlaba wonke kwezifo zokuvuselelwa kwe-10, lesi sifo sinikezwa ikhodi engu-170. Ngokuqothuka kwe-atherosclerosis emithanjeni yemilenze, ukuba khona noma ukungabikho kwe-gangrene kuchazwe ngokwengeziwe yinkomba:
0 - ngaphandle kwesigebengu,
1 - ne-gangrene.
Ukushoda komoya-mpilo kanye nezakhi zomzimba kuvusa ukuvuvukala. Ukuqhubeka kokuqhekeka kwe-atherosclerosis kuholela ekuguqukeni, ekuwohlokeni kweseli. Umzimba ubheka izicubu ezinephutha njengokuthile okuhlukile - inqubo ye-autoimmune yendawo iba. Amaseli avikelekile ahlasela izakhi eziguquliwe, abangele ukufa kwawo. Ngokomtholampilo, lokhu kuboniswa izilonda, izicubu ze-necrosis.
Izimpawu zesifo zincike ekunganakwa kwayo, kanye nasekhaya le-plaque. Uma ukwakheka kwakheka ngaphakathi kwemithambo yothanga noma esifundeni esikhulu, kuvela “i-limp ephansi”. Ubuhlungu bakhe ematholeni buyimpawu. Lapho isisu se-aorta noma i-artery ye -acac ilimele, i-lameness ibizwa ngokuthi "ephezulu." Kubonakaliswa ngobuhlungu emisipha yezinyawo, okhalweni, nasehlangothini lwe-hip. I-atrophy yemisipha yemilenze, uhhafu wamadoda uhlakulela ukungabi namandla.
Ngendlela emnene ye-atherossteosis, abantu bakhala ngokukhathala okusheshayo, ukubanda, ukugoba, ukudonsa, ukushiswa kwamathiphu weminwe, kunciphise ukuzwela kwemilenze. Umuntu onqabile uzobona udokotela onezimpawu ezinjengalezi, okuyihawu. Okwamanje, azikho izinguquko ezingenakulungiswa. Ngakho-ke, ukwelashwa kuzoba ngempumelelo ikakhulukazi.
Nge-atherosclerosis ewohlokayo, isikhumba sezinyawo, imilenze ephansi yomile, i-inelastic, iqale ukuphuma. Izithende zimbozwe isikhumba esinzima, sithambekele ekubhekeni imifantu.Ukukhula kwesikhonkwane kwehlisa ijubane, futhi izipikili ngokwazo azibukeki ziphilile (ziyathambile, ziba buthuntu, ziyisiququ). Izinwele zomlenze onenkinga ziqala ukuphuma, kwakhiwa izindawo zempandla. Umuntu ongelona izinyonga angahamba kuphela ama-200-250 m (isigaba 2a) noma kancane (isigaba 2b).
Imilenze ilimala ngisho noma umuntu anganyakazi. Isikhumba sinciphile. Ukulimala okuncane (ukusikwa kwezipikili, ukusikeka, ukulimala okuncane) kuholela ekwakhekeni kwezilonda ezijulile ezingashisi, imifantu. Umbala wesikhumba uncike esimweni somlenze. Umlenze ophakanyisiwe ubukeka uphaphathekile, wehliselwe phansi - wabomvu. Umuntu angajikisa kuphela efulethini. Ngisho nokuhamba iDemo (25-50 m) kuhambisana nokudabuka, izinhlungu ezinzima.
Isigaba 4 i-atherosulinosis ehlukanisayo yemilenze ibonakala ngobuhlungu obungabekezeleleki obungapheli. Iminwe, imilenze imbozwe izilonda ezivuthayo, ezingapholiyo, ezigcwele okuqukethwe okungwevu okungwevu. Izinyawo, imilenze iyavuvukala. IGangrene iyakhula.
I-Atherossteosis ingatholakala ngezimpawu ezithile. Ukuhlolwa okusizayo kuyadingeka ngudokotela ukuthola ukuthi ukutholakala kwendawo kunjani, usayizi wawo, inani lawo, ukushuba kokuphazamiseka kokugeleza kwegazi. Lokhu kuzomsiza ukuthi akhethe indlela engcono kakhulu yokwelashwa.
Indlela elula yokusiza ukuthola ama-amana ukukala ukushaya kwenhliziyo yakho. Ukungabikho kwaso emithanjeni yensikazi kukhombisa ukuvimbela imithambo ye-iliac. Uma kungabikho mgodi kumthambo we-popliteal, ukwahlukaniswa kutholakala endaweni ethile emikhunjini yabesifazane noma ye-popliteal.
Ngesikhathi sokuhlolwa, udokotela angenza uvivinyo olulodwa noma ngaphezulu olusebenzayo olusiza ukuhlaziya cishe izinga lokuphazamiseka kokujikeleza kwegazi.
Isimanga samadolo ePanchenko. Isiguli esihleliwe sicelwa ukuba siphonse umlenze obuhlungu phezu kwedolo elinempilo. Uma kunokuphazamiseka kokujikeleza, ngemuva kwesikhashana umuntu eqala ukukhononda ngobuhlungu emisipha yethole, umuzwa wokuxineka, umuzwa wokuthambekela kwezintuthwane ezandleni.
Goldman, Samuels kwecala. Isiguli silala emhlane wakhe, imilenze iphakanyiswe ngaphezu kombhede. Ucelwa ukuba agobise amalunga e-ankle. Ngokugeleza kwegazi okunganele, ngemuva kwemizuzwana eyi-10-20 umuntu uzwa izinhlungu.
Imininingwane enembayo engaphezulu ingatholakala ngokuhlolwa kwezinsizakusebenza:
I-Doppler ultrasound. Besebenzisa umshini othile we-ultrasound, udokotela unquma ukuhamba kwegazi kwezigaba ezahlukahlukene zemithambo yegazi. Imali ifakwa ngokuhamba kancane kwegazi.
I-Angiography ikuvumela ukuba ubone ngeso lengqondo ukulimala. Ukwenza imikhumbi ibonakale, i-ejenti ehlukile ifakwa phakathi kwe-artery. Kwi-classical angiography, kusetshenziswa umshini we-X-ray, izindlela ezintsha zocwaningo yi-MRI, CT.
Ukwelapha okuphelele kokuqothula i-atherosulinosis yemikhumbi kungenzeka kuphela ngesikhathi sesigaba sokugula. Ukwenqaba imikhuba emibi (ukubhema, ukusebenzisa kabi utshwala), ukudla okunempilo, ukuvivinya umzimba akuvumeli lesi sifo ukuthi siqhubeke.
Isigaba 1, i-2a iyakwazi ukwelashwa okuvumelanayo, esele yathuthuka kakhulu - idinga ukungenelela kokuhlinzwa. Uma ukuhlinzwa kufinyelelwe, ukwelashwa ngezidakamizwa kuzosiza ukuthuthukisa ikhwalithi yempilo.
Zonke iziguli ziyelulekwa ukuba zinamathele ekudleni okwehlisa i-cholesterol, okuvimbela ukuqhubeka kwe-atherosclerosis.
Ukwelashwa kokuqashwa kufanele kube okubanzi. Imisebenzi yayo eyinhloko:
ukuqedwa kwe-vasospasm - kutholakala ngokuqokwa kwe-antispasmodics (pentoxifylline, ukuhambisana, vazaprostan, nikoshpan, cinnarizine),
ukukhululeka kobuhlungu (ibuprofen),
ukuphuculwa kwezicubu zomzimba (i-solcoseryl, amavithamini e-B, umphimbo obuhlungu, i-dalargin, i-prodectin, i-parmidin),
Ukuvinjwa kwe-thrombosis (warfarin, heparin, trental, aspirin, reopoliglyukin),
ukuma kwesilinganiso kwamazinga we-cholesterol - ukudla, i-cholesterol synthesis inhibitors (rosuvastatin, lypimar, zokor).
Umuthi owaziwa kakhulu wesigaba sokuqala sesi sifo yi-pentoxifylline.Ukwethulwa kwe-vasher atherossteosis obliterans kuphatha ngempumelelo i-vazaprostan. Ngokwemvelo ye-autoimmune ye-atherossteosis, kunconywa ama-corticosteroids.
Ukuhlinzwa kuboniswa ezigulini ezinezigaba 2b-4 zalesi sifo. Ukwelashwa kokuhlinzwa kwe-atherosulinosis kubandakanya:
Ukuhlinzwa kweBypass. Omunye wemisebenzi ejwayelekile. Ukuhlinzekwa kwegazi kubuyiselwa ngokubonga kumkhumbi wokufakelwa okwenziwe ngemvelo noma okwezemvelo, oqiniswe ngaphezulu, ngaphansi kwesayithi lokunciphisa. Okwadlula ngendlela kuvumela igazi ukuthi lihambe ngokukhululeka emthanjeni.
I-Stent. Umnyombo wale ndlela ukufaka "isiphethu", esilungisa i-plaque, futhi futhi sandise ukukhanyisa komkhumbi.
I-Laser angioplasty. Kusebenzisa i-laser ekhethekile, ama-deposits ayahanjiswa noma abiwe.
I-balloon angioplasty. I-catheter enebhaluni eligoqiwe ekugcineni ifakwa esitsheni. Ngaphansi kokulawulwa kwamakhompiyutha, kuthuthukiswa endaweni yokwakhiwa kwe-plaque. Ibhaluni iyakhuphuka. Ukukhanya kwe-artery kuyanda, i-plaque iyachotshozwa noma ihlukaniswe.
Sy Symbactectomy Ukususwa kwemizwa eminingana enozwela ebhekene nokuqhekeka kodonga lomkhumbi kusiza ukukhulula umsipha wayo. I-Sympathectomy yenziwa ezigulini ezigula kakhulu okuye ezinye izinto ziye zahlinzwa. Le nqubo isetshenziselwa futhi kwizilonda zamathambo ezinama-atherosulinotic.
Ukulimala kwe-vascular, okweqile kwamafutha e-plasma kuyizinto ezimbili ezibalulekile ekwakhiweni kwe-atherosclerosis. Isizathu sengxenye ebalulekile yokwephulwa okunjalo yindlela yokuphila, kanye nokudla okungenampilo. Ukuqeda imikhuba emibi, ukulungiswa kokudla kusiza ezigabeni zokuqala ukumisa ukukhula kwesifo. Ezigabeni zakamuva - yehlisa ijubane ukuthuthuka bese ukhulisa ukusebenza kahle kokwelashwa.
Ukuze wenze lokhu, kunconywa:
ungasebenzisi kabi utshwala
yenqaba inyama ebomvu, ubisi luphelele noma unciphise ukusetshenziswa kwayo,
khawula inani lamaqanda
Gwema ukudla okucolisisiwe, ushukela, amafutha atholakalayo. Kukhona eziningi zazo emikhiqizweni yokudla esheshayo,
yenza okusanhlamvu, izithelo, imifino, i-legamu, isisekelo sokudla,
Zihlambe ngenhlanzi enamafutha (i-herring, i-mackerel, i-halibut, i-tuna, i-salmon).
Ezinye izindlela zingaba usizo ezigabeni zokuqala zesifo, ikakhulukazi uma unamathela ekudleni.
Ukwehlisa isifo sokuqina kwemithambo yegazi, zama ukuthatha lesi sinqumo sinye.
Azikho izindlela zokupheka ezaziwayo ezisiza nge-atherosclerosis ethuthukayo. Qiniseka ukuthi utshela udokotela wakho ukuthi imaphi amakhambi owaphuza ngokwelashwa kwakho okuyinhloko. Ukwemukelwa kwezinye zazo kuphambene nokuqokwa kwezidakamizwa.
Ukwehlukanisa i-atherosulinosis yemikhumbi yemikhawulo ephansi kudinga ukuphathwa impilo yonke kwezidakamizwa, ukulashwa esibhedlela ngezikhathi ezithile. Amathiphu alula angavimbela noma anciphise ukuqhubeka kwawo:
yeka ukubhema - izingxenye zentuthu zikagwayi zilimaza izindonga zemithambo yegazi,
bukela okudlayo - lokhu kuzosiza ukuvimbela ukwephulwa kwe-metabolism yamafutha,
lawula isisindo sakho
ungaqali izifo ezingamahlalakhona,
Kusukela uneminyaka engama-20, hlola i-cholesterol yakho yangempela, i-LDL, kanye ne-triglycerides.
Ann Giorgi. Isifo Sokuphazamiseka Kwemithambo Yegazi, 2016
IVioli, F, Basili, S, Berger, JS, Hiatt, WR (2012). Ukwelashwa kwe-antiplatelet ku-peripheral artery isifo, 2012
Ruiz-Canela, M, Martínez-González, MA. Izindlela zokuphila nezingozi zokudla zezifo zemithambo yegazi, ngo-2014
I-Rosa, i-Volkova Diabetes kumashadi namatafula. Ukudla futhi hhayi kuphela / Volkova Rosa. - M.: AST, 2013 .-- 665 c.
Malinovsky M.S., Svet-Moldavskaya S.D. Ukunqamuka kokuya esikhathini nokuya esikhathini, i-State Publishing House of Medical Literature - M., 2014. - 224 k.
IHirsch Axel Ukunqoba Isifo Sikashukela (186 maq., Ukuhumusha ngesiJalimane, imininingwane yomshicileli kanye nokusakazeka ayitholakali).
Izinqubo ezenzeka emzimbeni nge-atherossteosis ehlukanisayo yemilenze
Nge-atherosclerosis ehlukanisayo, kukhona ukwanda kwezindawo eziphethwe yi-atherosclerotic ohlangothini lwangaphakathi lwemithambo eyinhloko, enikeza igazi emikhawulweni ephansi. Lokhu kuholela eqinisweni lokuthi ukugeleza kwegazi emikhawulweni kukhubazekile, futhi kubangela ischemia yezicubu zemilenze.
Futhi, ngokuqhubeka kwesikhathi, ukumiswa kwe-plaque kwenzeka, ngenxa yokuhlangana kwayo nosawoti we-calcium kanye ne-atherossteotic plaque iba nzima kakhulu.
Esigabeni esinjalo ekwakhiweni kwe-pathology, kunzima ukulwa ne-atherosclerosis eqeda futhi lokhu kuthatha isikhathi eside.
I-plaque ihlanganisa kancane kancane i-lumen yempi.
Kulesi sigaba, kwenziwa izinhlobo ezi-2 zokuvalwa kwemithambo eyinhloko:
I-Arterial stenosis unciphise i-lumen ye-vascular,
Ukuhlukumezeka imithambo evalekile ene-plaque atherosselotic, noma i-thrombus. Ukuqhafaza okuyingxenye noma okugcwele kuqokonyisiwe.
I-plaque ihlanganisa kancane kancane i-lumen yempi
Izimpawu zokuqothula i-atherosulinosis
Emazingeni okuqala, ama-atherosselotic plaques akha imithambo eyinhloko yamaphethelo aphansi, le ndlela yokutholwa kwemvelo yi-asymptomatic, futhi umuntu akaziboni izimpawu ezibonakalayo.
Izimpawu zokukhula kwe-pathology ziqala kuphela lapho i-necrosis yezicubu zomzimba iqala ukukhula kusuka ekushoneni komoya ophelele kwezicubu zemilenze.
Emithanjeni eyinhloko yamaphethelo aphansi, i-atherosclerosis eqeda amandla iqhubekela phambili ngokushesha, ngenxa yomthwalo ophakeme emilenzeni, okuholela emiphumeleni emibi.
Izimpawu ezihlukile zokuqhubeka kwezifo
Kunezimpawu ezihlukanisayo zokwakheka kwamathafa e-atherosclerotic emithanjeni eyinhloko eyondla imilenze ephansi.
Izimpawu ezinjengalezi zifaka phakathi:
Izitho ziyabanda futhi ngesikhathi esishisayo,
I-Lameness iqala ukuvela lapho ihamba. Ngemuva kokuphumula okufushane, i-limp iyadlula,
Imilenze igeleza esimweni sayo esejwayelekile,
Kuvela usizi, ikakhulukazi enkonyane nasezinyaweni kusuka emithwalweni emincane hhayi eyinde,
Ukuqalwa kwendawo yesifo sezinhlungu akunayo indawo ethile yomlenze, ene-atherosclerosis eqothulayo, kungasukela emthanjeni we-lumbar kuye engxenyeni engezansi yezicubu zomzimba wethole,
I-epidermis esemaphethelweni inokoma kwe-pathological, izinwele ziyeka ukukhula, futhi izimpandla zemilenze zivele. Isikhumba emaphethelweni sine-hue ephaphathekile, ebuhlungu,
Ipuleti lezipikili emaphethelweni aphansi libambezela ukukhula kwalo,
Ngokuthuthuka okusheshayo kokuqothula i-atherosulinosis, nesikhundla somzimba esiqondile, ijubane elikhulu legazi liya emilenzeni kanye nemilenze iba bomvu ngombala, futhi uma uphinda uthatha isikhundla esivundlile, lapho-ke kuvela ubala,
I-Atrophy yezicubu zomzimba wethole. Umlenze uqala ukwehla ngokushesha emzimbeni womlenze ophansi kanye ne-ankle kuhlangene,
Emadodeni, i-potency isincipha ngokushesha. Lokhu kwephulwa kwenzeka ngenxa yokuncipha kokugeleza kwegazi ezingweni zezitho zomzimba,
Ukuvela kwezilonda ezi-trophic emaphethelweni aphansi kukhombisa ukuthi i-atherosulinosis obliterans isezingeni lokugcina lentuthuko,
Emaphethelweni, kuvela inethiwekhi yama-cyanotic venous
Kunezimpawu ze-tisc necrosis emilenzeni - luhlaza okwesibhakabhaka, noma mnyama umbala wesikhumba ezinzwaneni, noma endaweni yezithende.
Ukuhamba kwe-lameness kuqala ukubonakala
Lolu hlobo lwe-atherosclerosis amashumishumi eminyaka, lwatholakala kuphela lapho selukhulile (ngemuva kweminyaka engama-60), lapho izingqimba ze-choroid ziphulukana nokuqina kwazo.
Emashumini ambalwa eminyaka edlule, i-atherosclerosis eqeda amandla ibuye yathuthuka kakhulu futhi itholakala emadodeni aneminyaka engama-40 ubudala. Ngenxa yenkambo ye-asymptomatic ye-pathology, abantu abasha ababoni usongo oluqhubekayo emzimbeni.
Izizathu zokukhula kwe-sclerosis eseqisayo emaphethelweni aphansi kungaba yilezi:
Ukhuluphele. Isisindo esikhulu sesisindo ngokweqile sigcwala imithwalo engezansi, okufaka isandla ekuqhubekekeni kwe-pathology,
Ukwehluleka ukuhambisana nesiko lokudla. Isiguli sidla inani eliningi lokudla okunamafutha okuvela kwimvelaphi yezilwane nama-carbohydrate, okufaka isandla ekukhuphulekeni kokuxineka kwe-cholesterol ne-glucose egazini, okuba ngabasizi bezingxabano ku-lipid metabolism nokukhula kwama-cholesterol plaques kumagobolondo angaphakathi emithambo yemithambo yegazi,
I-Pathology yemithambo ye-varicose. Amathambo e-Varicose angaba yisisusa sokuqhekeka kwe-atherosulinosis kusuka ekungangeni kwegazi okwanele emaphethelweni aphansi kanye nokuphuma kabi kwegazi elibuhlungu kusuka ezinyaweni,
Izifo zezitho zomzimba ezithangeni, ezingaba futhi ngabasekeli be-atherosulinosis emilenzeni,
Iminyaka yesiguli. Kwabesilisa, iminyaka yobunzima yayiyiminyaka engama-40, kwabesifazane, iminyaka yokunqamuka kokuya esikhathini futhi yokuya esikhathini:
Ukulimala kwemilenze ephansi
I-Frostbite yemilenze nezinyawo ezingezansi. Kulesi simo, izinguquko ze-pathological zenzeka emithanjeni nasemithanjeni emilenzeni,
Ukulayisha kakhulu umzimba ngokuzikhandla, kanye nomsebenzi lapho amahora angama-8 10 umuntu ema ngezinyawo,
Impilo yokuhlala kanye nomsebenzi wokuhlala phansi inomthelela ekuphulweni kokuhamba kwegazi emilenzeni,
Isizungu. Uma isihlobo esiseduze sasigula nge-atherosclerosis, khona-ke ingozi yokuthuthuka ikhuphuka ngezikhathi ezingama-8,
Izimo zokucindezela eziphikelelayo,
Ukusebenza ezingemuva kwehomoni,
Isifo sikashukela se-pathology,
I-Alcohol kanye nomlutha we-nicotine kunciphisa ukuqina kolwelwesi lwangaphakathi.
Izigaba zokuqhekeka kwe-atherosulinosis
I-Atherossteosis obliterans of theiphephe inezigaba ezi-4 ezinezimpawu ezinzima esigabeni ngasinye:
isigaba sesigaba 1
isigaba sokuqala se-pathology si-asymptomatic kanye nokuqina okuncane emilenzeni kungenzeka ngokuhlala isikhathi eside emilenzeni, noma ukusebenza kanzima
isigaba sesibili kulesi sigaba, izimpawu zokuqala zokuqothula i-atherosulinosis emaphethelweni ziqala ukuvela:
· I-Intermittent claudication ivela ngemuva kokuhamba ibanga elingaphansi kwamamitha ayi-200.0,
· Ubuhlungu emaphethelweni kwedlula ngemuva kokuphumula imizuzu eyi-30.
isigaba sesithathu Izimpawu zesigaba sesithathu zinzima kakhulu:
Ukuqina emilenzeni kuzwakala lapho uhamba ngaphansi kwamamitha angama-200,
· Ebusuku izinhlungu azihluphi ngaso sonke isikhathi, nobuhlungu abuhluphi ngenkathi uphumula,
Lezi yizimpawu zokuqala ze-ischemia yezicubu zemisipha nemithambo yezingalo.
isigaba sesine isigaba sokugcina se-pathology sinezimpawu ezilandelayo:
Ubuhlungu esiswini esithintekile buhlala bukhona,
Ukwanda kobunzima kwenzeka ebusuku,
Izimpawu zokuqala zokufa kwe-necrotic kwezicubu zomzimba,
Izilonda ze-Trophic ziyavela,
· Ukuqunjelwa esiswini kwenzeka.
Faka isithombe sezigaba kuPokrovsky-Fontaine
I-Oasnk nayo ivame ukuba nokufakwelwa kwasendaweni hhayi esifundeni se-shin kuphela, kodwa nakwezinye izingxenye zemilenze.
Isigaba se-ischemia ephansi yemilenze
Kunezinhlobo eziningi ze-atherosulinosis esizeni sendawo eyenziwe kuyo:
I-OASK engxenyeni yethanga nethanga,
Ileal aortic atherosclerosis,
Ukuqhuma emlenzeni ongezansi,
I-Pathology ye-distal femur, lapho i-patency yegazi emithanjeni yomlenze ophansi ikhona,
Ukuqunjelwa ethangeni nasemlenzeni ophansi, kepha amanye amagatsha emithambo evame ukuletha ukugeleza kwegazi emlenzeni,
Multiple atherosclerosis yemithambo yemilenze.
Ukuxilongwa kwe-atherosclerosis emilenzeni kwenziwa ngezigaba:
Lapho isiguli sivakashela udokotela, senza ukuhlolwa kokubonakalayo kokuqala okususelwa kwizikhalazo zesiguli,
Usebenzisa i-palpation, udokotela ubheka ukuthi kukhona umgodi osesiswini esithintekile, noma kuyo yomibili imilenze,
Ngemuva kokuhlolwa okubukwayo nomlando wezokwelapha, udokotela uqondisa isiguli ekuhlolweni kwethambo,
Ukuxilonga usebenzisa i-rheovasography kungahlola ikhwalithi yokugeleza kwegazi emikhawulweni ephansi,
I-Doppler ultrasound inquma ukwenziwa kwama-plaque nobukhulu bomonakalo,
I-IR thermography. Le ndlela ihlola imisebe yokushisa elangeni, indawo ethintekile izohlala ibanda,
I-Arteriography ngokuqhathanisa ikuvumela ukuthi ukhombe zonke izindawo zokusungulwa kwendawo yezifo kanye nezinga lokuncipha kokhanyisi lomkhumbi.
I-atherosclerosis yokwelashwa okungenamkhawulo ephansi
Ukwelashwa kwe-atherosclerosis obliterans yemithambo eyinhloko yemilenze kuyinkimbinkimbi yezinyathelo ezingezona izidakamizwa kanye nokwelashwa kwezidakamizwa.
Izindlela zokwelapha ezingezona ezokwelapha zibandakanya:
Ukwenqaba umlutha wotshwala ne-nicotine,
Ukunyuka kancane kancane komthwalo emzimbeni kanye nokukhulisa umsebenzi,
Izinqubo zomzimba, i-electrophoresis ene-novocaine, ukwelashwa kwe-ozone yemithambo ephansi yemilenze, ukuvezwa kwemithambo yemilenze endaweni kazibuthe,
Vitamin kanye namaminerali izakhiwo ukuze kuthuthukiswe isimo somzimba jikelele,
Ukwelashwa okuphathelene nokwelapha izilonda
Amaresiphi wemithi yendabuko.
Ukudla kwe-arteriossteosis obliterans of the artery of the maoto
Esigabeni sokuqala sokuthuthukiswa kwe-pathology, kusetshenziswa ukudla okulwa ne-cholesterol, okwaziyo ukwehlisa inkomba egazini le-cholesterol futhi kumise ukuthuthukiswa kwe-atherosclerosis eqeda amandla emithanjeni yemilenze.
Izimiso zalokhu kudla yilezi:
Kungenzeka ukukhipha ukusetshenziswa kwamafutha ezilwane emaqandeni ama-2 ngeviki, inyama esetshenzisiwe kufanele isetshenziswe (i-veal encane, inkukhu, i-turkey),
Imikhiqizo yobisi olu-Sour kufanele ibe namafutha aphansi. Kwenqatshelwe ukudla izinhlobo ezinamafutha ezin ushizi nebhotela,
Ungadli isinkwa esimhlophe nemikhiqizo kafulawa, nezimpahla ezibhakiwe zemvubelo,
Ungadli ushukela namaswidi, kanye notshwala,
Yidla amakhambi amaningi amasha, imifino, amajikijolo nezithelo, futhi usebenzise i-olive yemifino, i-sesame,
Yidla izinhlanzi okungenani izikhathi ezi-2 ngesonto,
Zonke izinsuku, imenyu kufanele ibe nezinhlamvu, noma ubhontshisi,
Imikhiqizo kumele iphekwe ngokudonsa, ukubilisa, noma ukubhaka, ungayisebenzisa ukupheka ebhuthini eliphindwe kabili.
Yidla izinhlanzi okungenani izikhathi ezi-2 ngesonto
Kuyadingeka ukukhumbula esigulini ngasinye ukuthi izindlela zokupheka zabelaphi bendabuko zingaba ukwelashwa okusizayo kokwelashwa ngezidakamizwa:
i-hawthorn, izithelo ze-lingonberry notshani obungenakufa inkomba ye-cholesterol ephansi zonke izitshalo zidinga ukuthatha isipuni esingu-1 bese uthela ama-millilitha ayi-1000.0 wamanzi abilisiwe. Ake ume amahora amathathu kuya kwayi-4 ku-thermos. Ngemuva kokuhlunga, thatha ama-millilitha angama-200.0 ngosuku.
isifuba (ihhashi) kuthuthukisa ukuphuma kwegazi, kusize ukuvuvukala futhi kuqinise ulwelwesi lwamasipha Amagremu angama-20.0 amagobolondo wezithelo ze-chestnut, noma ama-inflorescence awo. Thela amamililitha amanzi ayi-1000.0 bese ubilisa imizuzu engama-30 kubhavu wesitimu. Faka amanzi abilisiwe emthanjeni wawo wokuqala futhi uthathe amagremu angama-50 ngosuku.
Ukwelashwa kwezidakamizwa kusiza ukumisa ukuqhubeka kwe-atherosclerosis ezigabeni zokuqala ze-pathology, futhi futhi kuyasetshenziswa ngemuva kokwelashwa okuhlinzwa nemithi kumele idakwe impilo yonke:
iqembu lama-statin kwehlisa inkomba ye-cholesterol yegazi rosuvastatin
izidakamizwa ze-antispasmodic Susa imisebe ye-arterial spasms, Ukulungiswa kwe-spa
· Inkomba yomfutho wegazi ophansi,
· Thuthukisa ukugeleza kwegazi emithanjeni eyinhloko nakuma-capillaries engxenye yemikhawulo.
Ama-anticoagulants kanye nama-antiplatelet agents · Yehlisa ukuqina kwegazi Umuthi weHeparin, umuthi we-Aspirin
Vikela ukugoqwa kwegazi.
ama-painkiller · Sindisa usizi, izidakamizwa uNovocaine
* Yehlisa inqubo yokuvuvukala.
Iqembu le-antioxidant ezingeni lama-membranes weseli livikela ulwelwesi lwasekhaya ekubhujisweni ascorbic acid
Kuyini i-atherosclerosis yamaphethelo aphansi?
I-atherosclerosis yemikhawulo engezansi iyiqembu lezinqubo ze-pathological ezithinta imithambo yegazi ephambili emaphethelweni aphansi, futhi kungukuphulwa okuqhubekayo kokuhlinzekwa kwegazi kwizicubu ngenxa yokunciphisa (i-stenosis) noma ukuqeda (imithambo yemithambo yegazi) yemithambo yegazi. Igama elithi "ukwahlukanisa" maqondana nalesi sifo lisho ukuxegiswa kancane kancane, kepha okuqinisekile kokuncipha kombani wemithambo yegazi.
Imithambo yimithambo yegazi emikhulu. Esimweni esijwayelekile, ukukhanyiswa kwemithambo yamahhala futhi igazi lijikeleza ngokukhululekile emgodini wegazi. Kodwa-ke, kwezinye izimo, i-lumen yemikhumbi iyancipha, nezicubu ezizungezile azinazo izakhi nomoya-mpilo odingekayo ukuze kugcinwe ukusebenza okuzinzile, ngenxa yalokho okuvela kwe-ischemia necrosis elandelayo.
Ngamafuphi, isisekelo sendlela yokwakheka kwalesi sifo ukuqhuma kwemikhumbi noma ukuncipha kwabo. Ukunxenxa kuyimbangela ejwayelekile, ngokwesibonelo, emzimbeni womuntu obhemayo kakhulu. Ukuqhekeka kungenzeka uma into efana namafutha - cholesterol (LDL - lipoprotein tata) ifakwa ezindongeni zemithambo yemikhawulo engezansi. Kodwa-ke, inqubo yokwakhiwa kwe-pathology ayilula kangako futhi idinga incazelo eningilizayo.
Izindlela zokuhlinzwa ezilandelayo zisetshenziselwa ukwelapha ama-atherosclerosis obliterans emithanjeni yemikhawulo engezansi:
I-Angioplasty ngokungenisa ibhaluni emthanjeni. Le ndlela encane yokuhlasela yokwazisa ngebhaluni emthanjeni ukuze kunwetshwe ukukhanyiswa komsele omkhulu endaweni ethintekile,
Ukuhlinzwa kweBypass le ndlela iqukethe ekwakheni isiteshi esidlula lapho umonakalo womthambo,
Indlela yokubabaza. Indawo ifakwe kumgwaqo omkhulu, onwebeka ngokukhanyayo futhi uvimbele ukuqhuma kwe-artery,
I-Autodermoplasty kwenziwa ezindaweni ezinkulu zesilonda sezilonda eziyingozi.
I-Arterial prosthetics ukushintshwa kwemithambo ethintekile yintsha. Lokhu ukwelashwa okuhlinzwa ezigabeni zokugcina ze-atherossteosis,
I-Artery Endarterectomy Ukuhlukaniswa kwe-artery kwenzeka futhi i-atherosulinotic plaque isuswa kuyo,
Ukunqanyulwa kwesitho esine-gangrene.
Futhi, ukwahlukanisa i-atherosulinosis yemikhawulo kungalashwa nge-laser. Le misebenzi idinga isikhathi esincane sokuvuselelwa kabusha, kepha ochwepheshe abanikeli siqinisekiso se-100.0% sokulapha i-pathology.
Inkambo yalesi sifo iqondene nomuntu ngamunye, ngakho-ke, izindlela zokwelashwa nazo zikhethwa ngokwahlukana.
Kuyadingeka ukwelapha i-atherosclerosis obliterans isikhathi eside, ngoba ukubuyela emuva kwalesi sifo kuvame ukwenzeka.
I-Angioplasty ngokungenisa ibhaluni emthanjeni
I-Atherossteosis obliterans of theiphephe iyindlela yokutholwa okulula ukukuvikela kunokwelashwa okulandelayo.
Ukuvimbela ukuthuthukiswa kwalesi sifo, kudingeka isikhathi eside ngaphambi kokuqalwa kwaso ukwenza izindlela zokuvimbela futhi ungakhohlwa ukuthi izinkundla ze-atherosulinotic emithanjeni yemithambo zingakha iminyaka eminingi:
Yilahla imilutha yokuphuza ngokweqile kanye nomlutha we-nicotine,
Ukulungiswa okuqhubekayo kwesisindo ukuvikela ukukhuluphala,
Ukuvivinya nsuku zonke nomsebenzi,
Ukudla okulungisiwe nenani lemikhiqizo yezilwane,
Gqoka izicathulo ezingenazithende eziphakeme,
Vivinywa emtholampilo uvule ukuhlaziya okwenziwe ngamakhemikhali we-lipid.
Inqubo yokwelapha i-atherosclerosis obliterans yemikhawulo engezansi inqunywa kakhulu yisigaba sesifo kanye nobukhulu bendawo ethintekile.Esigabeni sokuqala, ukuqedwa kwezimpawu zobungozi kungaqinisekisa ukuvimbela ukuthuthukiswa kwalesi sifo. Kufinyelela lokhu, isiguli kufanele siguqule indlela yaso yokudla nendlela yokuphila.
Umshini wokuthuthukisa lesi sifo
Imvamisa, i-atherosulinosis yemikhumbi yamaphethelo aphansi izibonakalisa ekugugeni futhi ibangelwa ukungasebenzi kahle kwe-lipoprotein metabolism emzimbeni. Indlela yokuthuthuka idlula ezigabeni ezilandelayo.
I-cholesterol kanye nama-triglycerides angena emzimbeni (adonswa odongeni lwamathumbu) athunjwa ngamaprotheni akhethekile okuhambisa - chylomicrons bese edluliselwa egazini.
Isibindi sidingida izinto ezivelayo futhi sixube izinhlobo ezikhethekile zamafutha - i-VLDL (cholesterol ephansi kakhulu).
Egazini, i-lipoproteidlipase enzyme isebenza kumangqamuzana e-VLDL. Esigabeni sokuqala sokusabela kwamakhemikhali, i-VLDLP idlulela kuma-lipoproteins aphakathi nendawo (noma ama-STLPs), bese kuthi esigabeni sesibili sokuphendula, i-VLDLP iguqulwe ibe yi-LDLA (low-density cholesterol). I-LDL yi-cholesterol ebizwa ngokuthi "embi" futhi yukuthi i-atherogenic (okungukuthi, ingavusa isifo sokuqina kwemizwa).
Izingxenyana ezinamafutha zingena esibindini ukuze kuqhutshekwe phambili. Lapha, kwakheka i-cholesterol ephezulu (i-high-density cholesterol (HDL)) evela kuma-lipoproteins (LDL ne-HDL), onomphumela ophambene futhi okwazi ukuhlanza izindonga zemithambo yegazi kusuka ezingqimbeni ze-cholesterol. Le yi-cholesterol ebizwa ngokuthi “enhle”. Ingxenye yotshwala obunamafutha icutshungulwa ku-asidi yokugaya ukudla, okudingeka lapho kusetshenzwa njengokujwayelekile kokudla, futhi ithunyelwa kumathumbu.
Kulesi sigaba, amaseli e-hepatic angahle ehluleke (ngofuzo noma ngenxa yokuguga), ngenxa yalokho esikhundleni se-HDL lapho kuphuma, izingxenyana zamafutha asezingeni eliphansi zizosala zingashintshiwe futhi zingene egazini.
Akunakancane, futhi kungenzeka i-atherogenic, iguqulwe noma iguqulwe ngenye indlela i-lipoprotein. Isibonelo, kukhishwa yi-H2O2 (i-hydrogen peroxide).
Izingxenyana ezinamafutha amancane kakhulu (LDL) zihlala ezindongeni zemithambo yemikhawulo ephansi. Ukuba khona isikhathi eside kwezinto zangaphandle ku-lumen yemithambo yegazi kunomthelela ekuvuvukeni. Kodwa-ke, ama-macrophages noma ama-leukocytes awakwazi ukubhekana nezingxenyana ze-cholesterol. Uma inqubo idonsela phansi, kwakhiwa izingqimba zotshwala obunamafutha - izinhlamvu - ziyakhiwa. Lama diphozithi anesisindo esiphakeme kakhulu futhi aphazamisa ukuhamba kwegazi okujwayelekile.
Kufakwa imidwebo ye-cholesterol "embi", futhi ukushayisana kwegazi kwenzeka ngesikhathi sokuqhekeka noma ukulimala kwekhompiyutha. Izicholo zegazi zinomphumela owengeziwe we-occlusive nemithambo ye-clog ngisho nangaphezulu.
Kancane kancane, ingxenyana ye-cholesterol ehlanganiswa neziqeshana zegazi ithatha ukwakheka okuqinile, ngenxa yokufakwa kukasawoti we-calcium. Izindonga zemithambo yegazi zilahlekelwa ukwanda kwazo okujwayelekile futhi ziba brittle, okuholela ekuqhekekeni. Ngaphezu kwakho konke, i-ischemia ephikelelayo necrosis yezicubu eziseduze yakhiwa ngenxa ye-hypoxia kanye nokuntuleka kwezakhi zomzimba.
I-atherosulinosis yemikhumbi yamaphethelo aphansi iyindlela yokukhohlisa. Kwezinye izimo, kungenzeka kungabonakali nakancane noma kuveze ngezimpawu ezingezinhle. Isibonelo, isiguli singachaza ubumsuka emilenzeni noma “amabhampa” ngokuthi “uhlala phansi” noma “ulele” ilunga.
Izimpawu ze-atherosclerosis zamaphethelo aphansi
Isifo sokuqaqamba kwemikhawulo engezansi kulula kakhulu ukukubona uqobo, kuncike ekunakekeleni impilo yabo nemizwa yabo. Kuboniswa ngohlelo lwezimpawu ezithile nezijwayelekile.
Ukubuyiselwa kokulunywa, "izimbambo" emilenzeni, ama-goosebumps, njll. Iziguli zichaza le mizwa ngokuhlukile, kepha imizwa ejwayelekile ifana nokuqina kwenqina ngenxa yokuhlala isikhathi eside endaweni engakhululeki. Kulesi simo, uphawu lukhona ngaphandle kwesizathu esibonakalayo.
Ukuzizwa kubanda emaphethelweni aphansi. Futhi uma kungekho sizathu esibonakalayo. Kungabonakala ngenkathi efudumele.
Isikhumba esiphaphathekile semilenze.
Ukuncipha kwengqimba yezicubu namafutha emathangeni, emilenzeni nasezinyaweni eziphansi. Ukunciphisa noma ukuvimba imithambo yegazi, ukuhlinzeka ngamakhemikhali oksijini nezakhi ezithini, kuholela ekuwohlokeni kwezicubu ezisebenzayo.
Ukulahleka kwezinwele okugcwele noma okuyingxenye yama-ankle nemilenze ephansi ngaphandle kokukhula kwezinwele okwalandela. Kubuye kuhlotshaniswe nokukhula kokuwohloka kwezicubu. Uhlelo lwe-capillary emilenzeni ethintekile lukhula ngokungejwayelekile, kepha alunakunxephezela ukuntuleka kwegazi.
Ubuhlungu emilenzeni.Babonwa besesimweni esizolile, lapho behamba futhi noma yimuphi umsebenzi womzimba uqina. Isibonakaliso esithile se-atherosulinosis yi-lameness, ebangelwa wubuhlungu obukhulu be-paroxysmal.
Ezimweni eziningi "ezinganakwa": mnyama noma ubomvu bezinyawo nezinzwani (izicubu zithola i-burgundy engeyona eyemvelo noma umbala obomvu omnyama), okukhombisa ukuqina kwegazi kanye ne-thrombosis. Izimpawu ziyisandulela senkinga enkulukazi efana necrosis.
Ukwakheka kwezilonda zomlenze (okuthiwa izilonda zesisu).
I-tissue necrosis (gangrene). Kubonakala ngezigaba zokugcina zenqubo. Njengoba lesi sifo sikhula ngokushesha, isigaba singase siqale ngokushesha.
Ngakho-ke, ngokuqhekeka kwe-atherosclerosis yamaphethelo aphansi, kuyabonakala inkimbinkimbi yezimpawu ezinkulu. Ukubonakaliswa kwabo kukhombisa isidingo sokunakekelwa kwezokwelapha okusheshayo. Esikhathini esiningi, ukubambezeleka kanye nokungahlonishwa kodokotela neziguli kufaka ukunqanyulwa.
Izimbangela ze-Atherosclerosis zamaLower Limbs
Ukwehlukanisa i-atherosclerosis yamaphethelo aphansi kungakhula ngenxa yezizathu eziningi:
UPaul Kokubili amadoda nabesifazane bathinteka ngokulinganayo. Iminyaka yabantu abahlaselwa yi-atherosclerosis isukela ku-45 kwabesilisa futhi isuka eminyakeni engama-50 yabesifazane. Abesilisa, njengomthetho, banamathuba amaningi we-1.5-3 ukuthola le-pathology. Izizathu zomehluko wezehlakalo azicaci ngokuphelele, kodwa kucatshangwa ukuthi i-estrogen (i-hormone yobulili besifazane) iyakwazi ngandlela thile ukuvimba ukuqhuma kwemithambo yegazi.
Iminyaka. Njengoba kwashiwo, ubungozi bokugula banda ngokuhambisana nobudala. Ngokuqala kokuya esikhathini, umsebenzi wokukhiqizwa kwama-hormone ocansi emzimbeni wesifazane uyancipha, ngenxa yalokho, ngemuva kweminyaka engama-50-55, inani lamacala phakathi kwabesilisa nabesifazane licishe lifane. E-Russia, izibalo ku-atherosclerosis ziyesabeka ngempela. ¾ abesilisa nabesifazane abangama-under abaneminyaka engaphansi kwengama-40 bahlushwa isifo somoya. Futhi eminyakeni ekhonjiswe ngenhla, inombolo isondela ku-90%.
I-cholesterol ephakeme kanye ne-triglycerides. Zombili izinto zinamandla okuhlanganisa imithambo futhi zibangele ischemia. Ungawehlisa kanjani i-triglycerides yegazi?
Umfutho wegazi ophakeme Kuyisilinganiso esikhulayo somfutho wegazi. Amanani ajwayelekile aqala ku-120/80 kuya ku-130/85. Ukuphikelela okuqhubekayo noma ngezikhathi ezithile zalezi zinombolo kukhombisa ukuba khona komfutho wegazi ophakeme. Imikhumbi ene-hypertension ngokushesha ilahlekelwa amandla ayo bese iba brittle. Ngaphakathi, izikebhe ezigugile zidonsa ukuthungwa kwazo okubushelelezi, zixakwe. Kulesi simo, ama-cholesterol plaque akhiwa ngokwengeziwe ngenkuthalo.
Izizathu zofuzo. I-Atherossteosis yisifo se-polyetiological. Isici sofuzo sidlala indima ebalulekile. Ngefa, izimfanelo ze-lipid metabolism emzimbeni, izici zesizinda se-hormonal, kanye nokucaciswa kwesistimu yokuzivikela komzimba, lapho ukuthuthukiswa kwe-atherosclerosis kungahamba ngokushesha noma kancane, kufakwa.
Imikhuba emibi. I-Nicotine, ebanzi emzimbeni, igxiliwe egazini, i-atherogenic kakhulu. Kodwa-ke, kubabhemi abasindayo, indlela okwenziwa ngayo isifo sokuqina kwemithambo yegazi ihlukile. Akungabazeki, i-nicotine iyakwazi ukuthinta i-lipoprotein metabolism emzimbeni, kepha iningi imbangela yokuntuleka kwamandla kwegazi ezicutshini zemikhawulo ephansi yi-stenosis yezindonga zemithambo yemithambo yegazi, hhayi ukuqhuma kwayo. Izidakamizwa zinomphumela ofanayo, kodwa owonakalisa kakhulu futhi ukusetshenziswa kwawo ngobuningi bamacala kusho ukufa okuthile noma ukukhubazeka okunzima. Utshwala emithanjeni emincane yokwelapha, kunalokho, kungaba nomphumela omuhle wokuvimbela.
Ukuba khona kwezifo ezihambisanayo kanye ne-pathologies. Ukuhambisana ne-atherosclerosis yisifo sikashukela.Ku-mellitus yesifo sikashukela, kudonswa imisebenzi ebaluleke kakhulu ye-lipid ne-lipoprotein metabolism, lapho ama-75-80% abantu abanesifo sikashukela bekhula eminyakeni yokuqala engama-4-5 noma ngokushesha okukhulu.
Ukuntuleka kwama-hormone egilo (i-thyroid hypothyroidism) kuthinta futhi imetabolism ejwayelekile, okwandisa ingozi yokuthuthuka kwe-atherosclerosis yamaphethelo aphansi ngo-35-40%.
Ukuxineka. Ikakhulu uma zihlala njalo futhi zibhaliwe.
Ukukhuluphala Ngokwayo, ivame ukukhuluma ngokuba khona kwezifo ze-metabolic.
Ukugxila kokuvuvukala emithanjeni yegazi enkulu.
Ekuhlolweni kokuqala, udokotela osola i-atherosclerosis yesiguli kufanele ahlole isiguli ngemininingwane eminingi futhi anake zonke izici.
Njengomthetho, emlandweni weziguli ukuhlanganiswa kwezinto ezilandelayo:
Ukuba khona "okuhlangenwe nakho" kokubhema,
Ukwanda kwesisindo somzimba
Ukuntuleka kwezifo zomzimba,
Bangaphezu kweminyaka engama-40 ubudala
Ngaphandle, isiguli sibukeka sigugile kunonyaka uqobo,
Izikhalazo zobuhlungu nezinkinga ngayo yomibili imilenze,
Imvamisa noma ngokulinganisela ekuhlaselweni imvamisa ye-claudication eyenzeka ngezikhathi ezithile, ebamba imisipha eminingi yemilenze: kusukela ezinqeni kuya kumathole.
Isikhumba sezinyawo siphaphathekile,
Ukushayela phezulu kwemithambo emikhulu cishe akuzwakali. Uma ulalela izindawo ezithintekile, kutholakala umsindo ongaphandle komoya.
Iphrezentheshini: umfutho wegazi ophakeme, isifo senhliziyo kanye / noma isifo sikashukela.
Ukuboniswa kuhlala njalo. Akuncike esikhathini sonyaka noma ngosuku.
Kwakunabantu emndenini ababenezifo zenhliziyo. Ngokucabanga okukhulu futhi isiguli sinezinkinga nge-cholesterol.
Izivivinyo nokuSebenza okuSebenzayo
Ekupheleni kweqoqo lomlando wezokwelapha, udokotela uqinisekisa ukuzingela kwakhe ngezivivinyo ezikhethekile zomsebenzi:
Isivivinyo esisebenzayo Burdenko. I-Atherossteosis ihlotshaniswa nezinqubo ezimile emikhunjini. Lapho ugoba imilenze edolweni, unyawo (kuphela) lumbozwe ngephethini yemabula ebunjiwe. Lokhu kukhombisa ukuphuma kwegazi okungalunganga kusuka esilingweni.
Isilingo se-Hyperemic Shamov / Sitenko. Ngenxa yezinqubo ezifanayo ezimile, ukujikeleza kwezicubu kuyaphazamiseka. Ukuthola ukuphazamiseka kwe-atherosclerotic emsebenzini wemithambo yegazi isikhathi semizuzu engama-3-5, kufakwa i-cuff ekhethekile ehlombe noma ethangeni. Kucindezela izicubu ezizungezile, kuphazamisa ukuhamba kwegazi okujwayelekile. Ukuhlinzekwa kwegazi okujwayelekile (futhi, ngokufanele, umbala opinki) wezicubu kuvame ukubuyela emuva kwemizuzwana engama-25-35. Uma ngabe imithambo ithinteka yi-atherossteosis, kungathatha umzuzu nesigamu noma ngaphezulu, kuye ngezinga lokuncipha kwesiteshi somkhumbi segazi.
Isivivinyo sokusebenza se-Moshkovich sokuhlola uphawu lwe-plantar. Isiguli sithatha isikhundla esiphakeme. Ngemuva kwalokho uphakamisa imilenze yakhe ibheke phezulu ngaphandle kokuguqa emajoyini asedolweni. Kulesi sikhundla, isiguli sicelwa ukuba siqhubeke imizuzu emibili kuya kwemithathu. Ngemuva kwalokho isiguli sithatha isikhundla sokuma. Imvamisa, kumuntu ophile kahle, isikhumba siphenduka sibe sesimweni sokuqala, ngoba ukuphuma kwegazi kusuka emikhawulweni engezansi, futhi lapho nje likhuphuka, ukuhanjiswa kwegazi kuyabuyiselwa, isikhumba siphinde sibe semuva okwemvelo epinki ngemizuzwana eyi-8-10 noma ngokushesha. Ezigulini ezine-atherosclerosis lokhu akubonwa. Isikhumba esivela kumasekhondi angama-30 noma ngaphezulu siyakwazi ukugcina umbala ophuzi, iphethini yemashi yemashi, njll.
Uma kuye kwatholakala ukuthi kukhona ukwephula umthetho, udokotela wenza ukuhlolwa kwesibili, okujulile, okuhloswe ngalo ukuthola izinga lokuhluleka kwegazi (uphawu lobuthi). Ukuze wenze lokhu, isiguli siphinda silale phansi bese welula imilenze yakhe phezulu. Kepha manje ucelwa ukuba agobeke futhi ahlukanise imilenze yakhe ngokuhlukile noma ndawonye. Umsebenzi wezimoto udinga ukuphuma kwegazi, futhi ukuntuleka kwalo kuzoholela ekukhathaleni ngokushesha kwemisipha. Abaphethwe yi-atherossteosis bathola ukukhathala okusheshayo nokuqina kwezinyawo. Ngokuya ngamandla nokushesha kokuqala kwalezi zinto ezimbili, kungenzeka ukusungula isilinganiso sokuntuleka kokuphuma kwegazi.
Ezinye izindlela zokucwaninga
Ziningi futhi zabelwe ukuqinisekisa ukutholakala kwezifo:
Ucwaningo lwelebhu (luhlaziya). Njengomthetho, i-atherosclerosis kukhona ukunyuka okuningana kwe-triglycerides, i-LDL, kanye nesikhombisi esinembile kakhulu futhi esinolwazi yisona esibizwa ngokuthi yi-atherogenic index (coeffnty), okunqunywa ngokwesisekelo sengxenye phakathi “okuhle” ne-cholesterol ephelele.
Izifundo zeRadioisotope zinganquma izinga nekhwalithi yokuhlinzekelwa kwegazi kwizicubu futhi kusungule isilinganiso segazi.
I-Radiography yenza kube nokwenzeka ukusungula ukwakheka kwasekhaya nosayizi we-occlusions yemithambo.
Izindlela ezintsha zokuxilonga ziyethulwa ngenkuthalo, njengokuthwebula okubonakalayo, lapho kungenzeka khona ukutadisha okuphathelene nemithambo ethintekile, ukunquma ijubane lokuphuma kwegazi ngabo futhi ulinganise ingcindezi, nabanye.
Uchwepheshe ongenalwazi uvame ukuba sengozini yokungasiboni lesi sifo. Isizathu silele ekuzivumelaneni okuphezulu komzimba ezintweni ezahlukahlukene eziphikisayo. Isiguli sakha ukunikezwa kwegazi ngokubambisana. Izakhiwo ezintsha zegazi ziyakhiwa futhi zikhula ezinikeza izicubu ngezinto ezibalulekile. Yize le ndlela ingakwazi ukufaka esikhundleni sohlelo olujwayelekile lokujikeleza endaweni ethintekile, isinxephezelo esiyinxenye sisatholakala. Lokhu kusikaza isithombe, kudida udokotela.
Ukwelashwa kwe-atherosulinosis yemikhawulo ephansi
Ukwelashwa kwe-atherosclerosis yemikhawulo engezansi kunobunzima obukhulu, ngoba lesi sifo, njengoba sekushiwo, singokwe-polyetiological. Ngakho-ke, kungabangelwa izizathu eziningi. Ukwelashwa kuqukethe ukuqeda imbangela futhi kuqede imiphumela emnandi neyesongela impilo. Udokotela kumele enze kahle futhi ngokushesha. I-Atherossteosis ayinciphisi kakhulu kuphela izinga lempilo, kodwa futhi isongela impilo yesiguli.
Izinketho zokwelashwa ziningi.
Izindlela zokubamba zihlanganisa:
Esimweni esibi kakhulu ,guqukela ezindleleni zokuhlinzwa. Ngokwesiko, ukuhlinzwa okuhlaselayo okusetshenziswa kakhulu kulezi zinsuku, kepha izindlela ezibucayi ezibucayi zokungenelela zibaluleke kakhulu.
Ukwelashwa kwezidakamizwa kuyinkimbinkimbi. Izifundo zokwelashwa zihle kakhulu, zenziwa izinyanga eziyi-1.5-2 ngokuvama okufika ezikhathini ezi-4 ngonyaka, ngokuya ngesithombe somtholampilo. Le mishanguzo ihloselwe ukulwa ne-spasm yemithambo yegazi nokuncipha kwayo. Ama-antispasmodics nezidakamizwa asetshenziswa anweba i-lumen yemithambo yegazi (njenge-no-shpa, compalamine, njll).
Indima ebalulekile inikezwa izidakamizwa ezandisa ikhwalithi yegazi futhi, ngaleyo ndlela, zithuthukise ukujikeleza kwazo (kufaka phakathi i-aspirin eyaziwayo, noma, uma kwenzeka kungabekezelelani, izidakamizwa "ezolile": i-chimes, njll).
Iziguli eziningi ezine-atherosulinosis zimiselwe ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela (futhi ezinye iziguli eziningi zinomlando wako). Ngakho-ke, amalungiselelo we-pancreatic afakiwe enkambweni yokwelashwa.
Kusetshenziswa kanye nokwelashwa kwezidakamizwa. Izinhlobo ezilandelayo ziphumelela kakhulu:
Umthelela ezindaweni ezithintekile ngenhlanganisela yokwelapha eqondile nokushintshana yamanje (ukuphazamisa ukwelashwa).
Ukuphathwa kwezidakamizwa okujulile ngokusebenzisa igesi kagesi (i-electrophoresis).
Lezi zinqubo zokwelapha zifaka isandla ekubuyiselweni okuphelele noma okuyingxenye kwemikhumbi ethintekile.
Ngokuhlanganiswa, lezi zindlela zisebenza kakhulu ezigabeni zokuqala noma zakamuva zokukhula kwesifo. Ezimweni ezingama-90% ezihambisana nokudla okusebenzayo kwe-hypocholesterol noma ukuyeka imikhuba emibi, ukwelashwa okulondoloziwe kunika umphumela owufunayo.
Kodwa-ke, ukwelashwa akusizi ngaso sonke isikhathi. Ngaphezu kwalokho, kungavela isimo lapho inqubo ihambile kakhulu futhi nemikhumbi igcina ilahlekelwe umsebenzi wayo ngaphandle kokuphinde ibuyiselwe. Kulokhu, ukuhlinzwa kubalulekile.
Ngokwesiko, indlela esemqoka ihlala i-vastery prosthetics. Umkhumbi othintekile futhi ulahlekelwe yimisebenzi yawo uyasuswa, kufakwa i-prosthesis endaweni yayo. Amaphaphu wesimanje wezinzwa awafani kakhulu nezicubu zemvelo, ngakho-ke afeza umsebenzi wawo ngesithunzi futhi avumela isiguli ukuba sibuyele empilweni ejwayelekile futhi egcwele.
Ngenhlanhla ezigulini, isikhathi asimile futhi umkhumbi uthintekile, kepha ungakaphelelwa ngokuphelele ukusebenza kwawo, ungabuyiselwa yi-angioplasty. Le ndlela ayihlaseli kepha isebenza ngempumelelo kakhulu yokuqeda i-occlusion noma i-stenosis yomthambo wegazi.
Ukuqanjwa kwalo kulele ekutheni i-endoscopist engaphansi kokulawulwa yikhamera yevidiyo ngokusebenzisa ukubhoboza emithanjeni yabesifazane ihambisa i-catheter emthanjeni wegazi iye endaweni ethintekile. Lapho efika endaweni ethintekile yomthambo, udokotela uyayandisa, noma aqede izinto zakwamanye amazwe, ngenxa yokuthi umsebenzi womkhumbi ubuyela emuva. Ngokungafani nokuhlinzwa okuxakayo ukufaka i-prosthesis, i-angioplasty ayihlukumezeki kangako. Omunye umbuzo awuhlali uyinto ongayenza.
Ukudla i-atherosclerosis yamaphethelo aphansi
Ngokwayo, ushintsho ekudleni alukwazi ukusebenzisa noma yimuphi umphumela wokwelapha. Kusebenza ngokuhambisana nezinye izindlela zokwelapha, noma njengesilinganiso sokuvimbela.
Ukudla i-atherosclerosis yamaphethelo aphansi akusona isenzo sesikhathi esisodwa. Ukuze uzuze umphumela oyifunayo, kufanele unamathele kuwo isikhathi eside. Indlela entsha yokudla kufanele ibe uhlobo lwendlela yokuphila. Lokhu kuzohlinzeka ukwelashwa, futhi ngasikhathi sinye ukugwema okunye. Kodwa-ke, ezimweni eziningi, ezigabeni zokuqala zesifo, ukunikela ngokudla isikhathi eside akudingeki kakhulu.
Ukudla kwesiguli esine-atherosclerosis kufanele kufake:
Imikhiqizo yenyama. Inyama enamafutha asezingeni eliphansi, izinkukhu (ukukhetha kunikezwa ku-turkey).
Inhlanzi. Inhlanzi enamafutha nayo ivunyelwe, ngoba amanoni ayo anomthelela omuhle emithanjeni yegazi.
Izithelo ezintsha, imifino namajikijolo - akunamkhawulo.
Imikhiqizo yobisi, kufaka phakathi okunamafutha.
Amaqanda abilisiwe futhi abhakwe (ama-omelet). I-lecithin equkethwe kuzo, kanye nenani elikhulu le-cholesterol, okuyothi lapho selilungiswe kahle, liphenduke ifomu "elihle", elizosula imithwalo yempahla ebekiwe.
Amafutha omifino (uwoyela we-olive ne-sunflower).
Amabele, pasta kusuka kufulawa we-wholemeal. Kanye ne-bran nesinkwa.
Izilimo ezinsundu kanye nezilimo ezikhululekile (i-lens, ubhontshisi, uphizi).
Iwayini elibomvu elomile.
Ushizi (okuqukethwe okungaphansi kwama-30%).
Kuyadingeka ukukhawula ukusetshenziswa kokudla okulandelayo:
Ukudla kwendabuko okucebile ngamafutha we-trans. Le margarine, isakazekile.
Khawula ukusetshenziswa kwe-offal (ubuchopho, izinso, isibindi) nemikhiqizo evela kubo.
Imayonnaise, ketchup kanye nezinye amasoseji eyenziwe ngenkuthalo.
Amazambane (athosiwe) nokudla okusheshayo. Amazambane avumelekile ngamanani amancane futhi abilisiwe kuphela (ngomfaniswano wawo) noma abhakwe.
Ukunamathela ekudleni okunjalo ngokuhlangana nokwelashwa nokwelashwa komzimba kungadambisa isimo bese kususa nemiphumela yesifo.
Ngakho-ke, i-atherosclerosis obliterans of the artery of the low decrease can be directly directly to the level of cholesterol in the gazi, futhi kungenzeka ingabi nalutho lwayo. Ngandlela thile, lesi yisifo esiyingozi kakhulu, okuthi uma kungekho kwelashwa okwanele kuholele emiphumeleni emibi. Kunzima impela ukuyichaza (ngokuzimela - akunakwenzeka ngokuphelele). Udokotela onolwazi kuphela ongabhekana nokuxilongwa futhi anikeze ukwelashwa.
Ngenhlanhla, ekuchithekeni kwemithi yesimanje kukhona uhla oluphelele lwezindlela zokuxilonga. Ukwelashwa kuvame ukulondolozwa ezigabeni zokuqala. Ngaphezu kokwelashwa kwendabuko nokwelashwa komzimba, ukuphulukiswa okujwayelekile komzimba nokusetshenziswa kokudla okukhethekile kunconyiwe. Kodwa-ke, ezimweni ezinzima kakhulu, zama ukuhlinzwa.
Ezemfundo: IMoscow State University of Medicine and Dentistry (1996). Ngo-2003, wathola idiploma evela esikhungweni sezokwelapha semfundo kanye nesayensi sokuphatha izindaba zikaMongameli waseRussia Federation.
Isaladi elimnandi nelinempilo kakhulu lomshanelo - izindlela zokupheka ezinhle kakhulu
Imikhiqizo engu-9 yokwelapha izilonda zesisu - amaqiniso esayensi!
I-Atherossteosis yisifo esingelapheki segazi eline-cholesterol namanye amafutha ngohlobo lokubekelwa nethala elibekwe odongeni lwangaphakathi lwemithambo, kanti nezindonga ngokwazo ziba zibaxaka bese ziphelelwa ngamandla. Izikejana ziba lukhuni kancane kancane ngenxa yokuncipha kwamafutha kanye no-lime odongeni, bese kuphele ukulahleka kwawo.
Umuthi we-herbal njengendlela yokwelapha, ngokusho kodokotela, ungasebenza ngempumelelo ku-atherosulinosis. Amakhambi okwelapha asetshenziswa kaningi njengama-adjuvants ukuthuthukisa imiphumela yemithi yasekhemisi, kanye nangendlela eyinhloko yokwelashwa kwalesi sifo. Umbono weziguli eziningi mayelana nawo uthathwa njengephutha.
I-atherosclerosis ye-aorta yenhliziyo yisifo esingalapheki esithinta lo mthambo we-artery. Kubonakala ngokwakhiwa kwe-lipid deposits eyodwa, noma ngaphezulu, okubizwa ngokuthi yi-atheromatous plaque, ekuxhumaneni okungaphakathi kwe-cardiac aorta. Ngokwezinga.
I-atherosulinosis yemikhumbi yobuchopho i-lesion eqhubekayo ngokuqhubekayo yemikhumbi etholakala esitho esivumelanayo. Kwezokwelapha, ungathola ezinye izincazelo zalesi sifo, ngokwesibonelo, i-atherosulinosis noma izilonda ze-atherosclerotic zemikhumbi yokuqwasha, kepha umongo uhlala ungashintshiwe.
Umbono wokuthi lokhu kudla kuwumsebenzi ongathandeki futhi obuhlungu, njengoba uphoqa umuntu ukuba alahle iningi lokudla “okumnandi” ngenxa “yabaphilile,” sekugxile ezingqondweni zabaningi. Kodwa-ke, uhlu lwemikhiqizo evunyelwe ukusetshenziswa ku-atherossteosis lubanzi impela. Isimiso esiyinhloko sokondleka kwenqubo ye-atherosulinotic.
Lesi sifo sihlotshaniswa nokuphulwa kwe-lipid metabolism. Ukwehluleka okunjalo kuthukuthelisa ukugcwala okuthiwa yi-cholesterol ebizwa ngokuthi "kubi" egazini. Ngenxa yalokho, kwakheka "ama-cholesterol plaque". Bona, belele odongeni lwemithambo yegazi, bathwele ingozi enkulu. Esakhiweni sokubumba, umkhumbi uba buthaka, wawo.
Abaningi, uma kungenjalo bonke, okungenani kanye empilweni yabo baye babona ukubonakaliswa okucacile kwezimpawu ezingezinhle ezibonisa ukuqala koshintsho lwe-organic ebuchosheni: ikhanda elingenasisekelo, ukukhala kanye ne-tinnitus, izinkinga zememori, ama-photopsies (umuzwa wamanga wokukhanya emehlweni), njll. Lezi Izimpawu zibonisa i-ischemia yamakhorali, noma, ngokumane, ukwephulwa kokujikeleza kwezitho zomzimba.